🥇 Inkqubo yeklabhu yokomelela komzimba
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 535
Ividiyo yenkqubo yeklabhu yokomelela komzimba
Uku-odola inkqubo yeklabhu yokomelela komzimba
Ukulungelelaniswa kunye nokwenza lula komsebenzi weqela lokuzilolonga ngoyena ndoqo kwimpumelelo yenkampani yakho. Inkqubo yethu yeklabhu yokomelela ikuvumela ukuba ufezekise le mpumelelo kunye nokwenza lula ukubalwa kwemali. Unxibelelwano oluninzi lwenkqubo yokunikwa kwengxelo yeklabhu yokomelela komzimba ivumela iingcali zeziko lakho lezemidlalo ukuba zisebenze ngokulula kwaye zilawule umsebenzi wazo, njengabalawuli kunye nabaqeqeshi, kunye nokujongana nokubalwa kwemali kwiklabhu yokomelela komzimba. Ukungaguquguquki kwenkqubo yokuzenzekelayo yeklabhu yokuzilolonga yokusekwa komyalelo kunye nohlalutyo lwabathengi likuvumela ukuba ungeze umthengi omtsha ngonqakrazo olunye lwempuku okanye ujonge ukuba kukho isivumelwano esenziwe ngaphambili, ngelixa ulawula yonke inkqubo. Ngolawulo olufanelekileyo lweklabhu yokomelela komzimba kunye nokuzenzekelayo kwayo unokufikelela kwishishini. Inkqubo yolawulo lokuzenzekelayo yolawulo lweevenkile kunye nezinto ezilawulayo eziququzelela ukubalwa kwemali kwiklabhu yokomelela komzimba ikuvumela ukuba ugcine iirekhodi zentlawulo yeenkonzo, ujonge idatha kumatyala, okanye nayiphi na eminye imigangatho. Ngoncedo lwenkqubo yethu yeklabhu yokomelela komzimba unokucwangcisa idatha malunga namaqela, ixesha - kuyanceda ukubala ngokuchanekileyo umthwalo wezakhiwo, iishedyuli zeengcali, kunye nokubalwa kwemivuzo kunye nolawulo lwabasebenzi beklabhu yokomelela komzimba.
Inkqubo yolawulo lweklabhu yokuqina kweengxelo ezenziweyo kunye nolawulo lweenkcukacha ngumncedisi omkhulu kwiakhawunti yakho. Ulawulo lweklabhu yokomelela komzimba kufuneka luzenzekele. Ukuza kuthi ga ngoku, sinokunikezela ngokwenza iishedyuli zoqeqesho ezinokuthi kamva zincede emsebenzini kunye nomthengi kwaye sigcine iiakhawunti kwiklabhu yokomelela komzimba. Ukwenza lula umsebenzi ungasebenzisa amakhadi akhethekileyo aneekhowudi zebar, apho inkqubo yethu yeeklabhu zokomelela komzimba ivumela ukusebenza. Oku kwenza ukuba ukulandelelwa kwabathengi kube lula, okunceda ukugcina iirekhodi ezichanekileyo zedatha yentlawulo. Khawufane ucinge indlela ekhululeke ngayo kunye nokuhlaziya le nkqubo! Unokuzikhuphelela inkqubo yeklabhu yokomelela simahla njengenguqulo yedemo. Inkqubo yethu inokunika ukukhanya okuluhlaza kwiklabhu yakho yokomelela komzimba! Kuyanceda ukulawula ngokulula imisebenzi yakho, ukugcina umkhondo wemali yakho!
Uhlalutyo luhlala luqala kubathengi bakho. Abaxhasi bangumthombo wentlalo-ntle yakho. Ukuhoya ngakumbi kubo, kokukhona bandwendwela umthambo wakho kwaye bazise imali eninzi. Into yokuba iziko lakho likhula kakuhle ibonakalisiwe kwingxelo ekhethekileyo yokukhula kwesiseko sabathengi esiveliswa yinkqubo yolawulo lobalo-mali yokuveliswa kweengxelo kunye nolawulo lwabasebenzi. Ukuba ukukhula kukude nokuhle, ke nikela ingqalelo yakho kwingxelo yentengiso. Ibonisa ukuba abathengi bakho bahlala befumanisa njani ngawe. Sukuchitha imali kwiindlela zentengiso ezingasebenziyo. Ngaphandle kokutsala abathengi abatsha, musa ukuphulukana nabadala.
Ingxelo ekhethekileyo yomsebenzi wabathengi ibonisa indlela abathengi abazisebenzisa ngayo iinkonzo zakho. Uyakwazi ukubona inani labathengi ababodwa kumaxesha akhoyo nawangoku. Ukulinganisa ngokufanelekileyo umthwalo wakho, uya kuba nakho ukubona kwingxelo ekhethekileyo ukuba zeziphi iiyure kunye neeyure zezona yure ziphambili zotyelelo. Ukuqonda amandla okuthenga ngoku ngoncedo lwenkqubo, uya kuba nakho ukuvelisa ingxelo "yokujonga umndilili". Kodwa nakuphi na ubunzima babathengi, kukho abo bemi ngaphandle, abazimisele ukuchitha ngaphezulu, kodwa bafuna ingqwalaselo eyodwa. Unokubafumana ngokulula abaxhasi abathembisayo ngokwenza ingxelo "yokulinganisa". Phezulu kohlelo ngabo bachithe uninzi kwiziko lakho, kwaye isezantsi inqanaba, abathengi abancinci abanomdla bachazwa apho. Ukongeza, uya kuba nakho ukwenza irejista yabanamatyala kwinkqubo, ukuba kukho imfuneko. Oku kulunge kakhulu. Bonke abo bangahlawulanga iiklasi bahlanganiselwe endaweni enye. Ukuba unethiwekhi yamasebe, uya kuba nakho ukuhlalutya zombini ngamasebe nakwisixeko. Ufumana phi kanye kanye eyona ngeniso?
Ukhuphiswano kushishino lwezemidlalo luya lusomelela ngokomelela. Kodwa imfuno yezi ntlobo zeenkonzo iyakhula, njengoko abantu beya befuna ukubonakala benciphile kwaye bezemidlalo. Ezi ziindlela zangoku. Ukuze uphile kwimeko yokhuphiswano olunjalo, kuyafuneka ukuba uhlale uliphucula ishishini lakho lezemidlalo, ulandele iindlela ezintsha kubuchwepheshe bale mihla kwaye uzame ukuzizalisekisa ngaphambi kokuba abachasi bakho benze. Inkqubo yethu lukhetho olukhulu kwabo bafuna ukuphucula ishishini labo kwaye babonelele abathengi ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kuphela. Inkqubo ye-USU-Soft ngumncedisi wale mihla kulungelelwaniso kwishishini lakho!
Baninzi ubuchwephesha obunomdla, apho umntu anokukhetha ukuba yeyiphi efanelekileyo kuye. Kukho ii-vets, abaqhubi, oosomajukujuku, abalungisa iinwele njalo njalo. Nangona kunjalo, kukho umsebenzi omnye obonakalayo kwaye uyathandwa kwezi ntsuku. Sifuna ukubonisa ukuba abaqeqeshi bayafuneka namhlanje, njengoko abantu abaninzi befuna ukulunga kwaye bebahle. Oku kukhokelela kwinyani yokuba kukho iiklabhu zomzimba ezininzi ezinikezela ngeenkonzo zemidlalo. Ke, sinokubona ukwanda kwenani labantu abanqwenela ukuba ngabaqeqeshi. Nangona kunjalo, ukwenza iklabhu yomzimba wakho ibe yeyona ibalaseleyo, ufuna olona qeqesho lobungcali. Ngelishwa, kunzima ukuqonda nokuvavanya umqeshwa onokubakho ngexesha lodliwanondlebe. Ngethamsanqa, kukho indlela yokwenza kunye nenkqubo ye-USU-Soft, ehlalutya ukusebenza kwabasebenzi ngokusekwe kwiiparameter ezininzi. Iikhrayitheriya eziphambili sisixa somsebenzi owenziweyo, kunye nengxelo evela kubaxhasi kunye nenqanaba kuluhlu lwabasebenzi abalungileyo.